Yinkomba nkombane naseThekwini | Bayede News
Home/ Izindaba/Yinkomba nkombane naseThekwini
Yinkomba nkombane naseThekwini
UMASIPALA i-Ethekwini ungomkhulu KwaZulu-Natal. Yiwo onesabelomali esikhulu kunabo bonke kweleNdlovukazi uMthaniya nokwenza ukuncintisana kwalabo abenza umsebenzi kube sezingeni eliphezulu. Khona lapho nezinsolo zokwenzelela zidla lubi. Eminyakeni eyedlule aboHlanga bake bakhala ngokuthi loMkhandlu uyenzelela kuthola abomdabu baseNdiya kuphela nokuyinto uMkhandlu owaqala wayichitha kepha wabe usuqhamuka nezinhlelo zokulungisa leso simo. Ngaphansi kohlelo iRadical Economic Tranformation , iMeya uNkk uZandile Gumede uthi uhlose ukuqinisekisa ukuthi naboHlanga bayahlomula emnothweni waleli dolobha.
Phezu kwayo yonke le mizamo kuyanda ukukhuluma okuthi ngale kwezinhloso ezinhle kukhona umsanka oqhubekayo. Lokhu kukhuluma kusola iMeya luqobo ngokuba ngubhongoza wenkohlakalo kanti abanye kulabo abaseka iMeya bathi inindwa nje yingoba izama ukukhuculula ukungcola okwenziwa ngakaphathi. Ozulázayithole bakhulume namanye amakhansela kanye nosonkontileka kulo mkhandlu nababe nemibono eyehlukene.
“Abantu okumele bakwazi wukuthi lo mama ( iMeya) ufi ke kukubi lapha. AmaNdiya ezitamuzela. Wafi ka yena wazama ukufaka aboHlanga manje laba abekade bedla bayalwa bavikela ukudla kwabo yikho beshaya umama”, kusho omunye wamaKhansela akulo Mkhandlu ocele ukuba angadalulwa ngenxa yezizathu zokuphepha nanokuthi akajutshwanga muntu ukuba aphawule.
Omunye umthombo usho okwehlukile: “Cha muntu omkhulu ngiyezwa nje kuthiwa iMeya imsulwa, thina siyazi ukuthi isibambe ngomqondo. Kunabantu edla nabo nethe uma ifi ka yasusa bonke laba bakaJames (iMeya endala). Kungekudala kuzovela baba ngoba noKhongolose uzoqala ukhuculule , uzongibuza owokuqala ozowa yilo mama ozenza msulwa, kusho lo mthombo obubonakala nasebusweni ukuthi kaweneme.
Okunye okuvelile wukuthi ngenxa yokwenzelela laba abasuke bengosonkontileka baphoqeleka ukuba banike iziphathimandla nosopolitiki okuthile ukuze izinto zabo zikhanye. Kwabakhulume neBAYEDE udaba lokukhipha okuncane sekuyinto engelona ichilo.
Omunye osebenza ngokuphekela umphakathi uthe umgolo wamakhansela udla lubi: “Hawu lokho (ukukhipha okuncane) sekuyingxenye yomsebenzi empeleni sesike sikhuphule amanani ukuze kungasithikamezi emsebenzini wethu. Okubuhlungu wukuthi sikhipha itshe lemali silinika abantu abangenzi lutho, phela yithi esisebenzayo hhayi lezi zisebenzi namakhansela adla ngandoda”, kusho lo sonkontileka.
Iphephandaba lesiNgisi langeSonto likhiphe okushaqisayo mayelana neMeya kanye nenye inkampani iCalvin Family, kulo mbiko umnikazi wale nkampani uMnu uCalvin Mathibeli uvumile ukuthi ike waba nomhlangano neMeya emzini wayo, wavuma futhi ukuthi kuke kwakhona akuvezayo okuwubhaqa lokukhanyisa. Uthi lolu bhaqa lwabe lucelwe yiMeya ukuze kukwazi ukuhlinzekelwa iqembu elibusayo ngemali kwazise kwabe kuyiwa okhethweni. “IMeya yangimema emzini wayo yangicela ukuba ngixhase ngezi-R 100 000 nathi yabe idingwa yi-ANC. Yabuye futhi yathi angikhokhele nezembatho ze-ANC,” kusho uMathibeli.
Ube eseveza ukuthi ibe isibhixana neMeya ngesikhathi isithi angabuye athi phohlo nasesikhwamweni sayo iZandile Gumede Foundation, uMathibeli uthi iMeya yanxusa okuncane nje okuyizi-R 150 000. OZulázayithole bamthumele uMathibeli imibuzo nokho kuze kwayoshicilelwa engabuyanga. Phakathi kwemibuzo bekukhona obuza ngqo ngezinsolo zokuthi uyawugwazela umsebenzi.
Nokho kulo mbiko iMeya ikuchithile lokhu njengoba icashumwe ithi : “Angikaze ngizwe naneyodwa inkampani ekhona kule thenda. Imikhankaso nokuzazisa emphakathini kwe- ANC kwenziwa emahhovisi esifunda.” Ozul’azayithole banabo ubufakazi bokuxhumana bukaMathibeli nezinye izisebenzi zoMkhandlu ngalolu daba. Imininingwane evelayo ikhomba wona umsanka kanye nemihlangano ebanjwe nenkampani kaMathibeli nezinye izinkampani.
Omunye wosonkontileka wazise IBAYEDE ukuthi nabo bebodwa sebephoqeleka ukuthi bakheqane ngoba umnyango uyancipha wokuthola imali. “Mina angiyazi nepolitiki kepha sengithe shi kuyo ngoba imali ithathwa nakuthuvi, ngifi ke lapha zikhona izingwenya zakhona kepha zingathembani.
Lokho kwenze kwalula ukuthi ngizicabele indlela ngoba mina ngikhanyisa kuloyo ongisizayo angingeni kulokhu kwamaqembu, kepha ukuze ngiqhubeke nokusizakala ikhadi nginalo,” kusho lo sonkontileka othi eminyakeni elishumi engenile umehluko mkhulu kakhulu kuye nasebhizinisini lakhe nathe selinabele nakwezinye izifundazwe.
IBAYEDE inobufakazi bezinkampani eziningana ezikhala ngokugwamandwa yizisebenzi zoMasipala kanye nosopolitiki. Kulobu bufakazi kuvela ukuthi abanye bakhokha njalo ngenyanga kuma akhawunti abanye abantu, kanti abanye benza kube lula bayiletha mathupha noma kuthiwa kabayokhokheka okuthile. Le kuthiwa yimpilo yansuku zonke koMasipala. Kulabo abakhulume neBAYEDE banxuse ukuthi kube nophenyo oluzobheka ukuthi izisebenzi lezi ngabe ziphila impilo elingana nomholo wazo yini.
NjengakuRDP nakuGEAR uKhongolose kumele akhethe